Briard Dog Breed နှင့်ပတ်သက်သည့်ထိပ်တန်းမေးခွန်းများ - Breeds
Briard Dog Breed နှင့်ပတ်သက်သည့်ထိပ်တန်းမေးခွန်းများ
ဒါဟာ Briard ပါပဲ။
ဒါက Bouvier လား
အဘယ်သူမျှမက Briard ပါပဲ။
ဒါကSchရာမ Schnauzer လား
အဘယ်သူမျှမက Briard ပဲ!
အဘယ်သူမျှမက BRIARD င် !!
တစ် ဦး က Briard ။ ဒါဟာပြင်သစ် sheepdog တစ်မျိုး။
ဟုတ်ကဲ့၊ ပြင်သစ်သိုးထိန်း - သူတို့အကြောင်းကျွန်တော်သိတယ်။
အဆိုပါ Briard အကြောင်း
တစ် ဦး က Briard ရယူခြင်း
Briards များသည်အရွယ်အလတ်စားမှကြီးမားသော (ခွေး ၂၂ မှ ၂၅.၅ လက်မ၊ ခွေး ၂၃-၂၇ လက်မအမြင့်) ရှိပြီးကွဲပြားခြားနားသောရှည်လျားသောကုတ်အင်္ကျီရှိပြီး tawny, grey, အနက်ရောင်သို့မဟုတ်ထိုအရောင်များကိုပေါင်းစပ်ထားသည်။ သူတို့ကကဲ့သို့တစ် ဦး ထိန်းကျောင်း / စောင့်ဖောက်ဖြစ်ကြသည် ဂျာမန်သိုးထိန်းများ , ရေနံချောင်း နှင့် Bouviers ။
Briards သည် US Kennel Club မျိုးစိတ်များတွင်အဆန်းမဟုတ်သောကြောင့်ယူအက်စ်တွင်တစ်နှစ်လျှင် ၃၀၀ ခန့်သာမှတ်ပုံတင်ခြင်းခံရသည်။ အနောက်တိုင်းဥရောပတွင်ယူကေနှင့်သြစတြေးလျတွင်လည်းလူ ဦး ရေပိုများသည်။
များစွာသောနိုင်ငံများ (ယူအက်စ်အပါအ ၀ င်) တွင် Briard ၏နားများကိုသူတို့စိုက်ထူနိုင်အောင်ခုတ်ထွင်ကြသည်။ ခွေးတစ်ကောင်သည်အသက် ၄ နှစ်မှ ၇ ပတ်အကြားရှိသည့်အခါမျိုးဆက်သည်နားကိုအလှည့်ကျပုံစံဖြင့် (အခြားသီးသောမျိုးစေ့များနှင့်မတူဘဲ) နားရွက်များကိုခွေး၏ခေါင်းထိပ်တွင်အတူတကွကပ်ထားသည်။
သူတို့သည်လျင်မြန်စွာကုသပေးပြီးခွဲစိတ်ကုသမှုမှအမြဲတမ်းစိတ်ဒဏ်ရာမခံစားရပါ။ ယူကေ၊ Australiaစတြေးလျနှင့်စကင်ဒီနေးဗီးယားနိုင်ငံများတွင်သီးနှံစိုက်ပျိုးမှုသည်တရားမ ၀ င်ဖြစ်ပြီးနားများမှာမူသဘာဝကျသည်။ တစ်ခါတစ်ရံတွင်အခြားနိုင်ငံများမှပရိသတ်များကနားကိုသဘာဝအတိုင်းထားရန်ရွေးချယ်ကြသည်။
သဘာဝနားသည်အင်ျဂလိ Sheepdog ၏နားနှင့်တူပြီး၎င်းသည်ခေါင်းကိုအပြားမှလဲလျောင်းနေစရာမလိုသော်လည်း၊ မိုဘိုင်းနှင့်ခွေးသည်နိုးနိုးကြားကြားရှိသည့်အခါဖော်ပြချက်အချို့ကိုပြသသင့်သည်။
၎င်းသည်ပိုမိုကောင်းမွန်စွာထိန်းသိမ်းထားသော dogdom ၏လျှို့ဝှက်ချက်များအနက်မှတစ်ခုဖြစ်ပြီးအခြားမဟုတ်သောအသိပညာရှိသောခွေးများသည်ဤအချက်ကိုသတိမမူမိကြပါ။ ဒါပေမယ့်ဟုတ်တယ်၊ အမေရိကန်ခွေးတွေမှာတွေ့ရလေ့ရှိတဲ့နားကတော့ဖြတ်တောက်ထားတဲ့နားပဲ။
ငါ Briard လက်ဝါးကပ်တိုင်ခဲ့သူတစ်စုံတစ် ဦး ကိုငါသိ၏။ ရှည်လျားသောဆံပင်နှင့်နားရွက်များရှိသောကြောင့်၎င်းသည် Briard ဖြစ်သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့သိသည်။
ငါ (မှတ်သားလောက်သောခွေးမဂ္ဂဇင်း၌ပင်) ကျွန်ုပ်ရေတွက်နိုင်သည်ထက်ဤမှားယွင်းသောအတွေးအခေါ်ကိုအကြိမ်ကြိမ်ကြုံတွေ့ဖူးသည်။ ရှည်လျားသောဆံပင်ပုံနှိပ်ထားသောအရောအနှောသည် Briard ရောနှောခြင်းမဟုတ်ပါ၊ အကြောင်းမှာ Briard ၏နားရွက်များသည်သဘာဝအတိုင်းမရပ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ငါတွေ့ခဲ့သည့် 'Briard ရောနှောခြင်းများ' အများစုသည်အင်္ဂလိပ်စာ Sheepdog သို့မဟုတ် Bearded Collie တို့ဖြစ်ပြီးဂျာမန်သိုးထိန်းသို့မဟုတ်ဆိုက်ဘေးရီးယား Husky ကဲ့သို့သောအရာများနှင့်ရောနှောခဲ့သည်။
တကယ်တော့သူတို့ကအင်္ကျီတွေအများကြီးဆုံးရှုံးလေ့မရှိဘဲများသောအားဖြင့်အခြားနှစ်ထပ်အင်္ကျီများကဲ့သို့ 'ထိုးနှက်သောအင်္ကျီ' မလိုကြဘူး။ ခွေးငယ်များသည်သူတို့၏အင်္ကျီများကြီးထွားလာသည်နှင့်အမျှသူတို့၏အင်္ကျီများကိုတစ်ကြိမ်သို့မဟုတ်နှစ်ကြိမ်ဆုံးရှုံးရလိမ့်မည်၊ သို့သော်တစ်ခါတစ်ရံရာသီသို့မဟုတ်အမှိုက်သရိုက်များပြီးနောက်ကုတ်များသည်တစ်ခါတစ်ရံတွင်ကုတ်အင်္ကျီများဆုံးရှုံးသွားတတ်သော်လည်း၎င်းသည်မလွှဲမရှောင်သာဖြစ်သည်။
ပြီးတော့ undercoat သုတ်ထားတဲ့အခါသူက (သင့်အဝတ်အစားတွေနဲ့ပရိဘောဂတွေပေါ်မှာမထွက်ဘဲအစား) အပြင်မှာအပြင်ထွက်ထားရမယ်။
ထိုအကြောင်းကြောင့်မျိုးတုံးခြင်းကိုတစ်ခါတစ်ရံ“ မသန်စွမ်း” ဟုဆိုသည်၊ သို့သော်လုံးဝမသွန်းလောင်းသောမျိုးစိတ်ကဲ့သို့သောအရာမရှိ။
ရှည်လျားသောအဖြေ: ၎င်းသည်ခွေး၏အင်္ကျီဖွဲ့စည်းမှုအပေါ်များစွာမူတည်သည်။ စံပြ Briard ကုတ်အင်္ကျီသည်ခဲယဉ်းပြီးရာသီဥတုဒဏ်ခံနိုင်သောကြောင့်ဝတ်စားဆင်ယင်မှုများစွာမပြုလုပ်ပါ။ သို့သော်ခွေးများစွာသည် ပို၍ နူးညံ့သောဂရုစိုက်သည့်ပျော့ပျောင်းသောအင်္ကျီများရှိသည်။
ဘေးကင်းလုံခြုံမှုရှိစေရန်မည်သည့် Briard မဆိုတစ်ပတ်မှနှစ်နာရီခန့်ကြာသည်းခံနိုင်မည်ဟုယူဆခြင်းသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်တစ်ပတ်လျှင်နှစ်ကြိမ်ဝတ်စားဆင်ယင်မှုများပြုလုပ်ရန် (နေ့စဉ်သန့်ရှင်းရေးလုပ်ရန်မလိုအပ်ပါ) ။ ထို့အပြင်နားများကိုသန့်ရှင်းစေပြီးခြေချောင်းများကိုလည်းညှပ်ထားသင့်သည်။
ပိုင်ရှင်အများစုမှာထိုသို့မလုပ်ပါ။ Briard ၏ကုတ်အင်္ကျီသည်သူ့ကိုထိန်းကျောင်းနေသောခွေးတစ်ကောင်အနေဖြင့်သူ၏အလုပ်မှဒြပ်စင်များမှကာကွယ်ရန်ပြောင်းလဲခဲ့သည်။ ဒါဟာအအေးသို့မဟုတ်အပူ၌ဖြစ်စေလက်တွေ့ကျတဲ့ကြောင်းကုတ်အင်္ကျီဖြစ်ပါတယ်။ Briards များသည်ပုံမှန်အားဖြင့်ဖြတ်ခြင်းသို့မဟုတ်ရိတ်ခြင်းမရှိကြပါ။
သငျသညျ Briard ၏စိတ်ထားကိုကြိုက်ပေမယ့်တိုတောင်းသောဆံပင်ခွေးကြိုက်တတ်တဲ့လျှင်, အလွန်ဆင်တူပေမယ့် Beauceron ဟုခေါ်တွင်ဆံပင်တိုနှင့်အတူအခြားမျိုးစိတ်ရှိပါတယ်,
အခြေခံအားဖြင့်၎င်းသည်ဆံပင်တိုသော Briard :-) ဖြစ်သည်။
သို့သော်ကျွန်ုပ်၏ Beauceron ၏ပုံသည် Briard နှင့်မတူပါ။ ၎င်းသည် Rottweiler သို့မဟုတ် Doberman ကဲ့သို့အရာဖြစ်သည်။
အင်္ကျီလက်အောက်တွင် Briards နှင့် Beaucerons တို့သည်အမှန်တကယ်အလွန်ဆင်တူပြီးမျိုးဆက်များသည်ဘုံမျိုးရိုးကိုမျှဝေကြသည် - ခွေးများသည်ပြက္ခဒိန်များသည် ၁၈၉၃ ခုနှစ်အထိသီးခြားမျိုးစိတ်များအဖြစ်ခွဲခြားခြင်းမရှိဘဲ ၁၉၀၀ ပြည့်နှစ်များအတွင်းဆက်ပေါင်းစည်းနေကြောင်းပြသခဲ့သည်။
Briard အတွက်သတ်မှတ်ထားသောစံသတ်မှတ်ချက်အရခွေးတစ်ကောင်သည်နောက်ကျောခြေတစ်ဖက်စီတွင်အနည်းဆုံးနှင်းခုံး (အပိုခြေချောင်းများ) ရှိသည်။ Great Pyrenees နှင့်အခြားဥရောပခွေးအနည်းငယ်နှင့်ထူးခြားသည်။
အဘယ်ကြောင့်ဤခွေးပေါက်စအားလုံး၌“ M” မှစသောအမည်များရှိသနည်း။
ပြင်သစ်များသည်တိကျသောနှစ်တွင်မွေးဖွားသောမွေးမြူရေးတိရစ္ဆာန်အားလုံးကိုစာတစ်စောင်တည်းဖြင့်မှတ်ပုံတင်ထားသောအမည်ပေးအပ်ရန်ကွန်ဗင်းရှင်းရှိသည်။ သာဓကအားဖြင့် ၁၉၉၆ ခုနှစ်သည် M ဖြစ်သည်။ ဤသို့ပြုခြင်းသည်ရိုးရာဓလေ့များကိုဖတ်ရန်၊ မည်သည့်ခွေးများသည်အမှိုက်သရိုက်များနှင့်တိရစ္ဆာန်မည်မျှရှိသည်ကိုပြောပြရန်လွယ်ကူစေသည်။
နက်ရှိုင်းသော၊ မီးခိုးရောင်နှင့်အနက်ရောင်တို့ဖြစ်သည်။ Tawny သည် US တွင်အသုံးအများဆုံးအရောင်ဖြစ်သည်။ tawny သည်၎င်း၏အင်္ကျီတွင်မီးခိုးရောင်သို့မဟုတ်အနက်ရောင်ဆံပင်များရှိသော်လည်း၎င်းသည်၎င်း၏ခန္ဓာကိုယ်၏မည်သည့်အစိတ်အပိုင်းမဆို tawny ဖြစ်ပါက tawny ဟုမှတ်ယူနိုင်သည်။
အသုံးအများဆုံးနည်းလမ်းမှာခွေးတစ်ကောင်သည်မီးခိုးရောင်သို့မဟုတ်အနက်ရောင်ဖြစ်ပြီးနောက်ကျောတွင်ခြေထောက်များနှင့်ခြေထောက်များပါ ၀ င်သည်။ ၎င်းကိုဥရောပနိုင်ငံများရှိမျက်မှောင်ကြုတ်သော်လည်း AKC စံနှုန်းအရလက်ခံနိုင်သည်။ နီနီရောင်သည်ဂျုံဖျော့ဖျော့အရိပ်မှသည်အနီရောင်နက်ရှိုင်းသည်။
နောက်အရောင်အများဆုံးအရောင်မှာအနက်ရောင်ဖြစ်သည်။ ၂၀၀၀ ရာခိုင်နှုန်းသည်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှ Briards အနက်ရောင်ဖြစ်သည်။ ဥရောပမှာတော့ခွေး ၅၀% နီးပါးဟာအနက်ရောင်တွေဖြစ်ကြတယ်။ လူမည်းများသည်ကုတ်အင်္ကျီတစ်လျှောက်တွင်ဖြူသောဆံပင်များဖြန့်ကျက်နိုင်သည်။ ယင်းသည်နိုင်ငံအားလုံးတွင်လက်ခံနိုင်ဆဲဖြစ်သည်။
မီးခိုးရောင်အတော်လေးရှားပါးအရောင်ဖြစ်ပါတယ်။ ယူအက်စ်တွင်မီးခိုးရောင်ခွေးအနည်းငယ်သာရှိသည်။ မီးခိုးရောင်အမျိုးအစားနှစ်မျိုးရှိသည်။ အပြာဟုခေါ်သောမီးခိုးရောင်ဖွား Briards နှင့်မီးခိုးရောင်ဟုခေါ်သည့်အနက်ရောင်ဖွားမျိုးဆက်များ။ မီးခိုးရောင်အမျိုးအစားနှစ်မျိုးကွဲပြားသည်။ Blue Briards ကိုယူအက်စ်တွင်ပြသနိုင်မည်မဟုတ်သော်လည်းဥရောပ၌ခွင့်ပြုထားသောအရောင်ဖြစ်သည်။
ဒီ pedigree ပေါ်မှာငါ့ခွေးရဲ့အဖိုးက 'Rassemblement Select' လို့ပြောပါတယ် ဘာကိုဆိုလိုတာလဲ?
လေးနှစ်တစ်ကြိမ်အမေရိကန်အမျိုးသား Briard ကလပ်တွင်ဥရောပခွေးပွဲများကိုအခြေခံသည့် rassemblement ဟုခေါ်သည့်အထူးပွဲကိုပြုလုပ်သည်။
ဥရောပတရားသူကြီးတစ် ဦး သည်ခွေးများအပေါ်တွင်အကဲဖြတ်စစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်ပြီးနောက်ပိုင်းတွင်စာအုပ်ပုံစံဖြင့်ထုတ်ဝေသည်။ အကောင်းဆုံးကို“ select” ဟုသတ်မှတ်သည်။
The Briard သည်မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများအနက်အသက်အကြီးဆုံးဖြစ်သည်။ အလားတူ shaggy ခွေးများ၏ပုံဖော်ခြင်းရှိပါတယ် 800 ကျော်ခန့်ရက်စွဲပါနှင့် 1500 ၏ရေးသားထားသောဖော်ပြချက်ရှိပါတယ်။ Charlemagne နှင့် Napoleon နှစ်မျိုးလုံးသည် Briards ပိုင်ဆိုင်သည်ဟုယုံကြည်ရသည်။
ယူအက်စ်တွင်ပထမဆုံး Briards ကိုသောမတ်စ်ဂျက်ဖာဆန်က Monticello ၌မွေးမြူရေးအစီအစဉ်၏အသေးစိတ်မှတ်တမ်းများကိုထားခဲ့ပြီးယုံကြည်စိတ်ချရသောမိတ်ဆွေများနှင့်ဂရုတစိုက်မွေးမြူခြင်းအတွဲများကိုတင်ခဲ့သည်။ သို့သော်ဥရောပမှပြန်လာသောစစ်သားများသည်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အပြီးတွင်ယူအက်စ်တွင်အမှန်တကယ်ပေါ်ပေါက်လာခြင်းမဟုတ်ပါ။
၎င်းကိုမကြာမီ AKC မှအသိအမှတ်ပြုခဲ့သည်။
ငါ breed ရဲ့သမိုင်းအကြောင်းဘယ်မှာပိုဖတ်နိုင်မလဲ
Diane McLeroth ရေးသားသော The Briard စာအုပ်တွင်အလွန်ကောင်းမွန်သောမျိုးပွားမှုသမိုင်းကိုတွေ့ရှိနိုင်သည်။
Briards သည်အသိဉာဏ်ရှိသူ၊ သူတို့သည်လူသားများနှင့်ပူးပေါင်းရန်ဆန္ဒရှိကြသော်လည်းထိုသို့ပြုလုပ်ရန်အကြောင်းပြချက်တစ်ခုလိုအပ်သည်။
သူတို့က“ လူတိုင်းကိုချစ်” တဲ့ခွေးတွေမဟုတ်ကြဘူး။ Briard တစ်ယောက်နဲ့တွေ့ပြီးမင်းကိုခဏတာစောင့်ကြည့်ပြီးရင်သူကသင့်ကိုသူကြိုက်လားမနှစ်သက်ဆိုတာသူကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်လိမ့်မယ်။ သူတို့သည်မိမိတို့ချစ်မြတ်နိုးရသူများကိုအလွန်ချစ်ခင်ကြသော်လည်းအများစုမှာသူစိမ်းများထံမှအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များနှင့်ဂရုမစိုက်ခြင်းအပေါ်အထူးစိတ် ၀ င်စားခြင်းမရှိပေ။
ဟုတ်တယ်၊ ၎င်းတို့ကိုပြင်သစ်ကျေးလက်ဒေသတွင်အကာအကွယ်မဲ့ကျက်စားရာနေရာများတွင်ထိန်းထားလေ့ရှိသည်။ ဤပုံစံကို“ နယ်နိမိတ်” ကျက်စားရာနေရာဟုခေါ်သည်။ အခြားတိုက်ကြီးကျက်စားသောအပင်များ (Bouvs, GSDs, ဘယ်လ်ဂျီယံစသဖြင့်) ကဲ့သို့ပင် Briard တွင်အားကောင်းသောစောင့်ရှောက်သည့်ပင်ကိုယ်အသိရှိသည်။ ဤအဝတ်ရည်လေ့အဖြစ်ကောင်းစွာရဲအလုပ်အတွက်အသုံးပြုကြသည်ဒါကြောင့်ပါပဲ။
သငျသညျသိုးအုပ်အုပ်ထိန်းသူစဉ်းစားနေကြသည်။ ဤရွေ့ကားအလုပ်အမျိုးအစားများအတွက်အသုံးပြုမျိုးကွဲများတွင်ဂရိတ် Pyrenees, Komondor, Kuvasz, Anatolian, Maremma နှင့်အလားတူခွေးများပါဝင်သည်။
ဤအလုပ်အမျိုးအစားသည်တိရစ္ဆာန်များနှင့်ကွဲပြားခြားနားသောစိတ်ထားကိုလိုအပ်သည်။ သိုးထိန်းများသည်ခွေးများကိုလှည့်စားလိုကြသည်၊ သိုးထိန်းအုပ်များသည်အုပ်ထိန်းသူနှင့်အတူနွားနှင့်အတူနေထိုင်ကြသည်။
ဟုတ်ပါတယ်၊ သို့သော်သူတို့သည်အလုပ်နှင့်သင့်တော်သော်လည်းရဲဌာနများသည်အင်္ကျီနည်းသောမျိုးဆက်များကိုယေဘုယျအားဖြင့်ပိုနှစ်သက်ကြသည်။ သူတို့သည် Schutzhund နှင့် Ring Sport ပြိုင်ပွဲများတွင်ပါ ၀ င်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်ခွင့်ရှိသည်။
Briards များသည်ယေဘုယျအားဖြင့်အိမ်အတွင်း၌အေးဆေးတည်ငြိမ်သောခွေးများဖြစ်ပြီးအခြားတိရိစ္ဆာန်မွေးမြူရေးခြံများကဲ့သို့ 'hyper' မဟုတ်သော်လည်းပုံမှန်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရန်လိုအပ်သည်။
တစ် ဦး ကနေ့စဉ်လမ်းလျှောက်နိမ့်ဆုံးထည့်သွင်းစဉ်းစားရပါမည်။ သငျသညျကို run သို့မဟုတ်တိုးမြှင့်ဖို့ဖောက်ရှာနေလျှင်ထည့်သွင်းစဉ်းစားကောင်းတစ် ဦး ဖောက်ဖြစ်ပါတယ်။
အပြင်မှာနေမယ့်ခွေးတစ်ကောင်လိုချင်တယ် တစ် ဦး Briard သင့်လျော်မလား
ယေဘုယျအားဖြင့်တော့မဟုတ်ပါဘူး။ Briards တွေဟာသူတို့ရဲ့လူတွေကိုအရမ်းချစ်တယ်၊ ပြီးတော့သင်ရှိနေချင်တယ်။
အကယ်၍ သင်သည်တစ်နေ့လျှင်နာရီပေါင်းများစွာခွေးနှင့်အလုပ်အတူတူနေမည်ဆိုပါကသင်နှစ် ဦး စလုံးသည်အစီအစဉ်ကိုသဘောကျမည်ဖြစ်သော်လည်းသူ၏လူမျိုးမှအလုံအလောက်အာရုံမစိုက်နိုင်သည့် Briard သည်ပြdogနာရှိသောခွေးတစ်ကောင်ဖြစ်လာနိုင်သည်ကိုသတိရပါ။
သူတို့ဟာခွေးကြီးတွေဖြစ်ပြီးဆူညံနေပြီးကလေးငယ်တစ်ယောက်ကိုလှဲချနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။ အခြားထိန်းကျောင်းနေသောခွေးများကဲ့သို့ပင်၊ nipping သည်လူများ၏အာရုံကိုဆွဲဆောင်ရန်သင့်လျော်သောနည်းလမ်းမဟုတ်ကြောင်းသင်ကြားရန်လိုအပ်နိုင်သည်။
ဤသို့ပြောရလျှင်မိသားစုများစွာတွင် Briards နှင့်ကလေးငယ်များပါ ၀ င်ပြီးယင်းပေါင်းစပ်မှုကိုအလွန်နှစ်သက်ကြသည်။
၎င်းသည်သင်“ လွယ်ကူသော” ဆိုသည့်အဓိပ္ပာယ်ပေါ်မူတည်သည်။ သူတို့ကအလွယ်တကူသင်ယူကြဘူး။ သို့သော်၎င်းတို့သည်လေ့ကျင့်သင်ကြားရန်လိုအပ်သည်။ ၄ င်းတို့သည်ကြီးမားလွန်းပြီးလုံ့လရှိသူ၊ စိတ်ဓာတ်ပြင်းထန်သူများဖြစ်ပြီး၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းများကိုချန်ထားခွင့်မရ။ အခြေခံနာခံမှုအတန်းအစား (၂) ခုကိုအထူးအကြံပြုလိုပါသည်။
ထို့အပြင်လေးလံသောလေ့ကျင့်မှုနည်းစနစ်များသည်များသောအားဖြင့် Briards နှင့်ကောင်းစွာအလုပ်မလုပ်ကြောင်းသတိပြုပါ။ အပြုသဘောလှုံ့ဆော်မှုယေဘုယျအားဖြင့်အင်အား -based နည်းလမ်းများထက်သူတို့နှင့်အတူအများကြီးပိုထိရောက်သောဖြစ်ပါတယ်။
ငါ Briards ခွေး - ရန်လိုဖြစ်ကြောင်းငါကြား၏။ အဲဒါမှန်ပါသလား
သူတို့ဟာတခြားခွေးတွေနဲ့လွှမ်းမိုးတတ်ပြီးထူးဆန်းတဲ့ခွေးတွေနဲ့မတူချင်ကြဘူး။ များစွာသောသူတို့သည်အခြားခွေးများနှင့်အဆင်ပြေပြီးယုံကြည်စိတ်ချရကြသည်။ သင်၏အကောင်းဆုံးနည်းမှာသွေးကြောထဲရှိခွေးများနှင့် ပတ်သက်၍ သင်ဝယ်ယူရန်စဉ်းစားနေသောမျိုးဆက်များကိုမေးခြင်းဖြစ်သည်။
ငါ 'အကာအကွယ်' ခွေးချင်တယ်။ ငါ့အတွက် Briard လား?
အဲဒါကမင်းအပေါ်မှာမူတည်တယ် ယေဘုယျအားဖြင့်ပြောရရင်သင်ဟာသင်ထက်ပိုပြီးအခိုင်အမာရှိသည့်မည်သည့်ခွေးကိုမဆိုရခြင်းသည်မှားသည်။ ထိုကိစ္စတွင်ခွေးသည်သင့်အား“ အကာအကွယ်ပေးသင့်သည့်အရာ” အပေါ်သူကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်ပြီးသူ၏ဆုံးဖြတ်ချက်များကိုသင်မကျေနပ်နိုင်ပါ။
အခြားတစ်ဖက်တွင်, သင်သည်ခွေးကိုမှန်ကန်သောအပြုအမူကိုဆုံးမresponsibilityဝါဒပေးဖို့တာဝန်ရှိတယ်ဆိုရင်, သင်တစ် ဦး Briard နှင့်အတူအလွန်ပျော်ရွှင်လိမ့်မည်။ မည်သည့်အရွယ်အစားမဆိုခွေးသည်ကျူးကျော်သူများကိုသတိပေးရန်ဟောင်နိုင်သည်။ ခွေးကြီးများသည်မလိုလားအပ်သောအာရုံစူးစိုက်မှုကိုအဟန့်အတားဖြစ်စေသည်ကိုသတိရပါ။
ထို့ကြောင့်ကြောက်စရာကောင်းသောခွေးကြီး (သို့) Greyhound ကဲ့သို့သော“ အကာအကွယ်မဲ့” ခွေးသည်သင်၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်လိမ့်မည်။
သူတို့၏ပျမ်းမျှသက်တမ်းမှာများသောအားဖြင့် ၁၀ နှစ်မှ ၁၂ နှစ်အတွင်းဖြစ်ပြီး၊
မည်သည့်ခွေး (မျိုးရိုးသို့မဟုတ်ရောနှောထားသောမျိုးရိုး) မဆိုမျိုးရိုးလိုက်သောပြproblemsနာများဖြစ်စေသည့်မျိုးရိုးဗီဇများကိုသယ်ဆောင်နိုင်သည်။
သန့်စင်သောသားပေါက်များနှင့်အားသာချက်မှာဂရုတစိုက်မွေးမြူခြင်းဖြင့်အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှဤပြproblemsနာများဖြစ်ပွားမှုကိုလျှော့ချနိုင်သည်။ Briards များသည်များသောအားဖြင့်တော်တော်လေးကောင်းမွန်သောမျိုးပွားများဖြစ်သော်လည်းအောက်ပါရောဂါများ (အားလုံးသည်မျိုးရိုးလိုက်အခြေခံရှိသည်ဟုသံသယရှိသည်သို့မဟုတ်သံသယရှိသည်) ကိုစိုးရိမ်စရာဖြစ်စေနိုင်သည်။
Orthopedic Foundation for Animals (OFA) သို့တင်ပြခဲ့သော x-rays ၏ ၂၀% ခန့်သည်မရိုးရှင်းသောတင်ပါးဆုံတွင်း dysplasia ကြောင့်ပြင်းထန်သောဒဏ်ရာများကိုမွေးမြူသူများဖြစ်သည်။ မွေးမြူရန်တိရိစ္ဆာန်များအားမျိုးပွားခြင်းမပြုမီ dysplasia ကင်းဝေးစေရန်သေချာစေရန် x-Ray ပြုလုပ်ရန်အကြံပြုသည်။
ဒါဟာနက်ရှိုင်းစွာရင်ဘတ်ပေါက်ဖွားမှုအားလုံးမှာဖြစ်ပျက်တတ်တာကိုသိရှိထားတယ်။ အစာအိမ်သို့မဟုတ်အခြားအတွင်းပိုင်းအင်္ဂါများသည်လည်ပင်းညှစ်။ ပိတ်ဆို့ခြင်းခံရနိုင်သည်။
ရောဂါလက္ခဏာများမှာ panting၊ productive retching နှင့် / သို့မဟုတ် hard, distended abdomen များပါဝင်သည်။ Bloat သည်အရေးပေါ်အခြေအနေဖြစ်ပြီးချက်ချင်းဆေးကုသမှုလိုအပ်သည်။ တိရိစ္ဆာန်များရှင်သန်ရပ်တည်ရေးအတွက်အခွင့်အလမ်းများရရန်ခွဲစိတ်ကုသရန်လိုအပ်လေ့ရှိသည်။
အချို့တိရိစ္ဆာန်များကိုဖောင်းပွမှုဆီသို့ ဦး တည်စေသည့်မျိုးရိုးလိုက်အချက်များရှိကောင်းရှိနိုင်သည်။ သို့သော်ထိုသို့ဖြစ်ခဲ့လျှင်အမွေအနှစ်အတိအကျကိုမသိပါ။
ရှက်ခြင်း၊ ရှက်တတ်ခြင်းနှင့်ရန်လိုခြင်းတို့သည်ကံမကောင်းစွာ Briards တွင်ဖြစ်ပွားလေ့ရှိပြီးမျိုးရိုးဗီဇအခြေခံရှိနိုင်သည်။ သို့သော်ဤအမျိုးအစားအတွက်မှန်ကန်သောစိတ်ထားမဟုတ်ပါ - စံကဖော်ပြသောစိတ်ထားသည်“ ကြောက်လန့်ခြင်းမရှိဘဲပညာရှိပြီးကြောက်ခြင်းမရှိ” သင့်ဟုဖော်ပြထားသည်။
Briards များသည်ပုံမှန်အားဖြင့်သူစိမ်းများကိုအလွန်စိတ် ၀ င်စားခြင်းမရှိသော်လည်း၎င်းတို့သည်၎င်းတို့ကိုရှောင်ရှားရန်သို့မဟုတ်ရန်လိုသောသဘောရှိသင့်သည်ဟုမဆိုလိုပါ။
အကယ်၍ သင်သည် Briard ကိုဝယ်ယူရန်စဉ်းစားနေပါကမိဘနှစ် ဦး စလုံးကိုသင်တတ်နိုင်သလောက်ကြည့်ရှု။ “ ဤခွေးများသည်ငါနှင့်အတူနေထိုင်လိုသောစိတ်သဘောထားမျိုးရှိပါသလား” ကိုမြင်လျှင်ကောင်း၏။ မိဘများ၏စိတ်ထား၊ ဘွဲ့မယူပါနှင့်။
ထို့အပြင်မျိုးပွားသူအား Briard နှင့်သင့်လျော်သည်ဟုသူတို့ခံစားရသည့်စိတ်ထားနှင့် ပတ်သက်၍ အသေးစိတ်မေးမြန်းခြင်းသည်အထောက်အကူပြုနိုင်သည်။ အကယ်၍ ရှက်ကြောက်ခြင်းသို့မဟုတ်ရန်လိုခြင်းသည်လက်ခံနိုင်ဖွယ်စိတ်ထားဟုထင်ရလျှင်မျိုးပွားသူနှင့်ဆက်ဆံခြင်းသည် ပို၍ ကောင်းပေမည်။
Briards တွင်ပေါ်ပေါက်နိုင်သောဤရောဂါပုံစံနှစ်မျိုးရှိသည် - အလယ်ပိုင်းတိုးတက်သော retinal atophy (cPRA) နှင့်ယေဘူယျ PRA ။ နှစ်ခုစလုံးသည် US တွင်ရှားပါးသော်လည်းကမ္ဘာ့အခြားဒေသများတွင်တွေ့ရလေ့ရှိသည် - အထူးသဖြင့်သတင်းများ ယူကေရှိ Briards ၆ ခုအနက် ၅ ခုသည်သယ်ဆောင်သူများသို့မဟုတ် cPRA ၏သက်ရောက်မှုများဖြစ်သည်။
cPRA (သို့) PRA နှင့်သက်ဆိုင်သောခွေးများသည်လူကြီးဘဝတွင်မျက်စိကွယ်သွားလိမ့်မည်။ ပျောက်ကင်းစရာမရှိပါ။
သိုင်းရွိုက်အဆင့်နိမ့်သည့်ခွေးများသည်နှေးကွေးနိုင်သည်၊ အင်္ကျီပြproblemsနာရှိနိုင်သည်၊ ကုသမှုတွင်နေ့စဉ်ဆေးဝါးများပါဝင်သည်။
ဤသည်မှာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုခွေးအနည်းငယ်တွင်ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်ဟုသတင်းပို့ထားသောသွေးထွက်ရောဂါတစ်ခုဖြစ်သည်။ vWD antigen အဆင့်ကိုစစ်ဆေးရန်သွေးစစ်ဆေးမှုတစ်ခုရရှိနိုင်သော်လည်း Briard မျိုးဆက်များအကြားအငြင်းပွားဖွယ်ရာပြandနာတစ်ခုဖြစ်ပြီးအများစုမှာ၎င်းကိုမစမ်းသပ်ကြပါ။
တိုးတက်သောလွှာဆိုင်ရာကျုံ့ခြင်းနှင့်မတူသည်မှာ၎င်းသည်အစောပိုင်းခွေးပေါက်စတွင်တွေ့ရသောရောဂါနှင့်တိုးတက်မှုမရှိသောရောဂါဖြစ်သည် (ထို့ကြောင့်“ စာရေးကိရိယာ”) ။
ဘေးဒဏ်သင့်ခွေးများသည်အလင်းနည်းသောအခြေအနေများတွင်မမြင်နိုင်ပါ။ ၎င်းကိုမျိုးရိုးဗီဇကြောင့်ဖြစ်ပေါ်စေသည်ဟုလည်းယုံကြည်ရသည်။ ၎င်းကို electroretinogram (ERG) မှရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်သော်လည်း၎င်းသည်ပုံမှန်မျက်စိစစ်ဆေးမှု (ဆိုလိုသည်မှာ CERF စာမေးပွဲ) တွင်ရောဂါမရနိုင်ပါ။
အချို့သော Briards များသည်ခွေးလှေးများနှင့်အချို့သောအစားအစာများနှင့်မတည့်ပါ။ ဒီတစ်ခါလည်းအမွေအနှစ်အတိအကျကိုမသိသေးပါဘူး။ ကင်ဆာ။ ကံမကောင်းအကြောင်းမလှစွာများစွာသောချစ်စရာကောင်းတဲ့ Briards တွေဒီနေ့ခေတ်မှာကင်ဆာရောဂါပျောက်ကွယ်သွားပြီ၊ lymphosarcoma အသုံးအများဆုံးအမျိုးအစားဖြစ်ဟန်ရှိသည်။
ယခုအချိန်တွင်ကင်ဆာသည် Briards တွင်မျိုးရိုးလိုက်ခြင်းရှိမရှိမသိရှိသော်လည်း၎င်းသည်အနာဂတ်တွင်စိတ် ၀ င်စားမှုနှင့်သုတေသနနယ်ပယ်ဖြစ်ဖွယ်ရှိသည်။
ငါ Briard လိုချင်ပါတယ် ငါဘယ်လိုရှာမလဲ။
အမျိုးသားကလပ်သည်သင့်ဒေသရှိမျိုးဆက်တစ်ခုသို့မဟုတ်ကယ်ဆယ်ရေးသူတစ် ဦး ကိုရှာရန်ကူညီနိုင်သည်။ ကလပ်အဆက်အသွယ်များကို Briard Homepage တွင် http://weber.u.washington.edu/~diannes/briard/clubs.html တွင်တွေ့နိုင်သည်။
တနည်းကား၊ Briard မျိုးဆက်များသည်သူတို့ခလေးများကိုတောင်းသည့်အရာနှင့်အနည်းငယ်ကွာခြားလေ့ရှိသည်။ အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ခွေးတစ်ကောင်ကိုတောင်းခံရတဲ့ဒေါ်လာ ၃၀၀ ကနေ ၁၅၀၀ ကြားဘယ်နေရာမှာမဆိုငါကြားဖူးတယ်။
ငါ Briard ကိုရှာနေပါတယ် မျိုးဆက်များကိုငါဘယ်မေးခွန်းတွေမေးသင့်သလဲ။
သင်ကလပ်အသင်းဝင်တစ် ဦး လား မရရှိလျှင်၊ ယူအက်စ်ရှိမျိုးဆက်အများစုသည်အမေရိကရှိ Briard Club အဖွဲ့ဝင်များဖြစ်ပြီးကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကိုလိုက်နာရမည်။ မျိုးပွားသူသည်အသင်း ၀ င်မဟုတ်ပါကအထူးသဖြင့်အမှိုက်အမြောက်အများကိုမွေးမြူသူတစ် ဦး ဖြစ်လျှင်၎င်းသည်မမှန်ကန်ကြောင်းသတိပေးသင်္ကေတဖြစ်နိုင်သည်။
ဒီအမှိုက်သရိုက်များချန်ပီယံ၏မိဘများလား။ ဒါဟာများသောအားဖြင့်တစ် ဦး Briard အပေါ်တစ် ဦး ချန်ပီယံထားရန်အလွန်ခက်ခဲသည်မဟုတ်, ယူအက်စ်အတွက်မြိုးဆကျအများဆုံး၎င်းတို့၏ခွေးဖေါ်ပြခြင်းတွင်ပါဝင်ပတ်သက်နေကြသည်။ 'ချန်ပီယံလိုင်းများ' သို့မဟုတ်ချန်ပီယံအဘိုးအဘွားသို့မဟုတ်ကြီးမြတ် - အဘိုးအဘွားများ၏တောင်းဆိုမှုများအားဖြင့်လည်းအထင်ကြီးမနေပါနဲ့ - အမှိုက်သရိုက်များ၏မိဘနှစ် ဦး စလုံးချန်ပီယံမဖြစ်သို့မဟုတ်လက်ရှိပြသလျက်ရှိသည်, အဘယ်ကြောင့်ထွက်ရှာပါ။
မိဘများအပေါ်အဘယ်ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်ခဲ့သနည်း။ အနည်းဆုံးတော့အမှိုက်သရိုက်များ၏မိဘနှစ် ဦး စလုံးသည်တင်ပါးဆိုးရွားသော dysplasia ကင်းစင်ရမည်ဖြစ်သည်။ တင်ပါးများကိုတိရိစ္ဆာန်များအတွက်အရိုးအထူးကုဖောင်ဒေးရှင်း (OFA) မှ dysplasia အခမဲ့အသိအမှတ်ပြုရန်နှင့် OFA အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ကိုမိဘနှစ်ပါးစလုံးတွင်တွေ့ရန်အကြံပြုသည်။ ကံမကောင်းစွာပဲ, သူတို့ရဲ့ခွေးကိုကိုယ်စားပြုမျိုးဆက်များသူတို့မလုပ်ခဲ့သည့်အခါ OFA အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ရှိသည်အဖြစ်ပြသခဲ့သည်ရှိခဲ့, ဒါကြောင့်အလားအလာဝယ်လက်သတိထားကျင့်သုံးရန်အကြံပြုသည်။
မိဘများ၏စိတ်ထားအကြောင်းပြောပြပါ။ စိတ်ထားအကြောင်းအပိုင်းကိုကြည့်ပါ။ ဖြစ်နိုင်လျှင်သင်နှစ် ဦး စလုံးမိဘများနှင့်တွေ့ဆုံရန်အကြံပြုသည်။ မိဘနှစ် ဦး စလုံး၏စိတ်ထားကိုသင်အဆင်မပြေပါက PUPPY ကိုမဝယ်ပါနှင့်။
ဤသည်ခွေးသေချာပေါက်လျစ်လျူရှုသို့မဟုတ်အလွဲသုံးစားမှုခဲ့ဆိုလိုသည်မဟုတ်ပါ; များသောအားဖြင့်၎င်းသည်ပိုင်ရှင်များသည်အကြောင်းပြချက်တစ်စုံတစ်ရာကြောင့်သိမ်းဆည်း။ မရနိုင်သည့်ခွေးတစ်ကောင်သာဖြစ်သည်။ ကယ်ဆယ်ရေးခွေးများသည်အလွန်ကောင်းသောအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များပြုလုပ်နိုင်ပြီးတစ်နေ့လုံးပိုင်ရှင်များမရှိသောအိမ်များအတွက်ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်နိုင်သည်။
အဆိုပါကုန်ကျစရိတ်ယေဘုယျအားဖြင့်အနည်းဆုံးဖြစ်ပါသည်, များသောအားဖြင့်ကိုယ့်ခွေးစောင့်ရှောက်မှုအတွက်ကယ်ဆယ်ရေးရဲ့ကုန်ကျစရိတ်ကိုဖုံးလွှမ်းရန်။ အမေရိကရှိ Briard Club တွင်ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းများကိုညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးသည့်စေတနာ့ ၀ န်ထမ်းတစ် ဦး ရှိသည်။ ဆက်သွယ်ရန်အချက်အလက်အတွက်ဝဘ်စာမျက်နှာကိုကြည့်ပါ။
Briard မရယူခင်သင်ဘာလုပ်နေလဲဆိုတာသေချာသိအောင်လုပ်ပါ။ ဒါကလူတိုင်းအတွက်မသင့်တော်သောမျိုးစိတ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
ဖြီးလိမ်းပုံ၊ လေ့ကျင့်မှုနှင့်စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအတွက်သူတို့၏လိုအပ်ချက်များနှင့်အတူပိုင်ရှင်မှအခြားမျိုးပွားမှုများစွာထက်စာလျှင် Briard နှင့်ပိုမိုလိုအပ်သည်မှာသေချာသည်။ ထို့အပြင် Briard သည်“ ချစ်စရာကောင်းသော” ဖြစ်သော်လည်း၎င်းသည်ပထမဆုံးနှင့်အဓိကအားဖြင့်အလုပ်လုပ်သောမျိုးဆက်ဖြစ်ကြောင်းသတိရပါ။
၎င်းသည်ပထမဆုံးအကြိမ်ခွေးပိုင်ရှင်သို့မဟုတ်ခွေးကိုဖျက်ဆီးလိုသော“ wimpy” လူတစ် ဦး သို့မဟုတ်တစ်စုံတစ် ဦး အတွက်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုမဖြစ်နိုင်ပါ။
ဆိုလိုသည်မှာ - ငါတ ဦး တည်းမရှိဘဲဖြစ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။
ငါတို့ချစ်သောကြောင်ခွေး ၁၀ ကောင်
အိတ်ဆောင် Pitbull အကြောင်းကိုဒဏ္ာရီများနှင့်အမှန်တရားများ
dachshund wirehair ခွေးပေါက်လေးများရောင်းရန်ရှိသည်